Sahityabatika: कुरो कुन्थरो
सधैं ब्यङ्ग्य कबिता र ब्यङ्ग्यबन्ध लेखे पनि यसपाली एउटा वास्तविक तर ब्यङ्ग्य बनाउने पाराले ब्यङ्ग्य वार्ता रोज्ने बिचार गरे। यसको लागि पात्र पनि चाहियो। नेतालाई के खोज्नु,बरु मेरो घर वरिपरीको मान्छेलाई रोज्नु भन्ने लाग्यो।मेरै कोठा नजिक एक जना बुढी हजुर आमा बस्छिन। सधै हासो ठट्टा पनि गर्ने भएकाले उनिसङ्गै वार्तालाप गर्ने जमर्को गरे।छतमा बसेर वार्तालाप सुरु गरियो।
मैले पहिलो प्रस्न हजुर आमैलाई कचौरामा राख्दै भने। "हजुर आमाको उमेर कती पुग्यो नि? हेर्दा त अझै फुर्तिली सुर्तिली देखिनुहुन्छ ?"
प्रस्नलाई टपक्क टिप्दै,"यो प्रश्न महिला हक बिपरित हो भन्छन। बाबुले सोदिहाल्नु भो । अली ठिटना हुनुहुदोरहेछ । अरु महिलालाई सोधेको भए पहिलो गासमै स्वाद चाखी हाल्नुहुन्थ्यो । मेरो उमेर त भर्खर असिमा बसेकी छु । अब उमेरको कुरा गर्दा त पैतिस चालिस बर्षलाई अध बैसे भनिन्छ । त्यो हिसाबले त मान्छेको बैस सत्तरी असी पुगेपछी पो पुरा हुदो रहेछ । साठी बर्ष नाग्दा
पनि नेपालमा युबा नेता भनेको त्यसो पो रहेछ नि बाबु ।" अहिले चाँही हजुर आमैले कुरोको चुरो समाउनु भयो।
अनी आज आमैलाई आउन लागेको तीजको बारेमा सोध्न मन लाग्यो । तपाइको पालाको र अहिलेको तीजमा के फरक पाउनु भयो?"
मेरो प्रश्ण भुइमा नखस्दै हजुर आमैले भनिन।"धेरै फरक छ बाबु। त्रिसुलीको पानी र टुकैचाको पानी जस्तो। गाउकी सानी र शहरकी नानी जस्तो फरक। हाम्रा पालामा त एक दिन दर खान्थ्यौ । साथी सगिनिको घर जाइन्थ्यो । तीजको भाकामा गाउथ्यौ। रमाउथ्यौ।आज भोली त तीन दिनको तीज तिस दिन गयो। गरीबको भन्दा धनीको भयो। सुद् साकाहारी भन्दा माछा मासु खाकाछन। पुरुषको भन्दा धरै ह्विस्की बियरमा रमाकाछन।तीजका गीतमा भन्दा हिन्दी गीतमा नाचेकाचन।साडीमा भन्दा प्यान्ट कट्टुमा कम्मर भाचेकाछन । यो सस्कृतिमा बिक्रिती भयो बाबु । भ्रष्टाचारमा चढेर होस कि बिदेश तिर सडेर होस , लोग्ने बिचराले कमाएकै छन । स्वास्निहरु रमाएकैछन ।" आमैले कुरो थब्दै भनीन। "हेर्नुस बाबु कस्तो जमाना आयो आयो। पोहर साल नातिको बिहे गर्नलाई बुहारी खोजियो। केटी तर्फकाले मेरो नातिलाई जाड चुरोट ,रक्सी खान्छ कि खान्न भनी सोधे। मेरो नाती कै नखाने।रक्सीको त कुरै छैन। मासु पनि नखाने। केटी पक्षकाले बुहारीलाई प्यान्ट लाउन दिने सर्त राखे बाबु। हामीले पनि यती जाबो कुरो त हो भनी मान्यौ। अहिले त बाबु हाफप्यान्ट मात्र लाउछे। सधैं पार्टी भनेर मातमा मात्तिएर मध्य रातमा आउछे। लोग्नेलाई भात तताएन भनेर दुई चार लात नै लाउछे। महिला भएर महिलाकै कुरा काटेको जस्तो। धेरै भयो भने त बोल्न पनि पर्‍यो। पुरुषले बोल्दा चटकन खान के बेर?"
हजुर आमासङ्गको कुरो रमाइलो बन्दै थियो। मैले अर्को प्रश्ण तेर्साउदै भने। अहिले र पहिले बजारको कुरा गर्दा हजुर आमैलाई कस्तो लाग्छ?
"हजुर आमाले जिब्रो फटकार्दै भनिन। "बजारको त कुरै नगर बाबु। हाम्रा पालामा चार आनाले होटेलमा टन्न मासु भात खान पाइन्थ्यो। त्यसमा पनि सुद्द खाने कुरा खाइन्थ्यो । अहिले के पो सुद्द पाउछ र ? नाती बाबु?अहिले त मायाप्रितीमा पनि मिसावोट भयो। अब चोखो माया पाउनलाई खप्पराँ लेखेको हुनुपर्छ। बजार भाउ मात्र हो र ? मायाप्रीतीको भाउ झन चर्को छ। मोटर,गाडी ,होटेल रेस्टुरेन्टमा लान नसक्नेले त के मायाप्रीती पाउने र लाउने।"हजुर आमैले कुरो कोट्याउदै भनिन। 'बाबु नातिलाई अघी देखी सोधु भनेको। तपाईं कुन पत्रीका बाट हो नि ? मेरो फोटो त आउछ ?" मैले हजुर आमैको फोटो लिदै भने "म कुनै पत्रीका बाट होइन। हजुरमाको कुरोकानी फेस बूकमा राख्नलाई हो। त्यसमा झन धेरै देश बिदेशका नाती नतिनाहरुले हेर्छन।"हजुर आमै झन खुसै हुँदै भनिन। "त्यसो भए त फेस बूकमा मेरो छोरोले पनि हेर्छ होला। अस्ती बुहारीलाई दुई चार वटा तीजका गीत पठाइदिने भन्दै थियो। बिदेश तिर पो बरु राम्रो सङ्ग तीज मनाउछन रे। ल त बाबु सबै देश बिदेशका नाती नतिनिहरुलाई तीजको शुभकामना । नातिलाई दर खाने निम्तो पनि "हौस त हजुर आमा सङ्ग कुरा गर्दा रमाइलो लाग्यो। पछी फेरी भेटौँला।" यती भनेर हजुर आमैसङ्ग बिदा भए र हाम्रा कुरा कानि साथीहरुसँग जस्ताको तस्तै पस्कदै बिदा भए।मलाई हजुर आमाको कुरो सोर्है आना मुनासिव लाग्यो।यहाँलाई कस्तो लाग्यो?जय काउकुती।
Labels: अन्य, ब्यङ्ग्य वार्ता